तराई मधेशका किसानहरू बाढीले त्राहिमाम : सांसद अरगरिया | अपन जनकपुर
तराई मधेशका किसानहरू बाढीले त्राहिमाम : सांसद अरगरिया
यो जाति बिशेषको लागि हुन्छ भने लोकसेवा आयोगको नाम रुपान्तरण गर्दा हुन्छ ।
अपन जनकपुर न्यूज ।संघीय सांसद एवम् धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नं.२ का प्रतिनिधि सभा सदस्य उमाशंकर अरगरियाले तराई मधेशको किसानमा त्राहिमाम भएको दुख पोखेका छन् ।
मंगलबार संघीय सदनमा बोल्दै सांसद अरगरियाले गत अन्तिम असारमा तराई मधेशमा गएको भीषण बाढीका कारण किसानहरुको बीउ बिजन नाश भएको कारण अधिकांश किसानले अहिलेसम्म खेतलाई बाझो राख्न बाध्य भएको बताए । तराई मधेशको बाढीले मच्चाएको विड्ण्डाता कारण किसानहरुको बालीनालीमा क्षति गरेर उनिहरुको पनि उठिवास भएको अवस्था सदन मार्फत जानकारी गराए ।
उहाले भने तराई मधेशमा गएको भीषण बाढीका कारण धेरै बाढी पीडितहरुलाई उठिवास भएको छ । उनिहरुले राम्ररी खान पाएको छैनन् अझ घरको अन्न राख्ने सामाग्रीहरु समेत नष्ट भएको हो वा बाढीले बगाएर लगेको हो , तर पनि केन्द्र सरकारले एक पाइला चालेको छैन । यस्तो विपदमा पनि सरकारले ध्यान नदिए प्रश्न को माथि गर्ने त ? तराईको किसानहरुको बिउबिजन र बाली नाली समेत नष्ट गरि त्राहिमाम भएको छ । यति दिन देखि सरकारबाट राहतको पहलको लागि आवाज उठाए पनि अहिलेसम्म कुनै चासो नदेखाउनुलाई के भन्नु ” ?
नेपालको संविधान २०७२ मा पनि सुरक्षीत आवशको जिकिर गरिएको उल्लेख गर्दै सांसद अरगरियाले बाढी पीडितहरुको आवासको लागि यथाशीघ्र समाधान तर्फ जानुपर्ने बताए । उनले बाढी पीडितहरुको लागि सरकारको तर्फबाट उचित राहत र बाढी नियन्त्रणको दीर्घकालीन समाधान गर्नको लागि कमिटी गठनको आवश्यकता औल्याए ।
भिडियो हेर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नु होस्
यसै क्रममा सांसद अरगरियाले लोकसेवा आयोगको बिज्ञापन आदिवासी ,जनजाति लगायतका बिज्ञापनमा विभेद भएको भन्दै यो कदापि लोकहितमा नभएको जिकिर गरे । अरगरियाले भने ,: विभेद किन ? यो लोकसेवा लोक हितमा हुन्छ एउटा जाति लागि हुदैन । त्यसो भए प्रहरीको दमन किन ? यो जाति बिशेषको लागि हुन्छ भन्ने लोकसेवा आयोगको नाम रुपान्तरण गर्दा हुन्छ ” ।